Dalalka bariga Afrika oo aqoonsan doono shahadooyinka Jamacadaha kala duwan – The Voice of Northeastern Kenya
Dalalka bariga Afrika oo aqoonsan doono shahadooyinka Jamacadaha kala duwan
Star FM December 27, 2016
Ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala dalalka bariga Afrika ayaa la filaya in laga bilaabo bisha soo socoto loo ogolaado in ay jaamacad kale ku biiraan hadii ay madaxda 5 wadan ay ansaxiyaan heshiis arrintan ku aadan.
Wasiirada waxbarshada ee gobolka ayaa ku heshiiyay qaraar la hor geynayo madaxweynayasha oo ku aadan dhaqangelinta dib u eegis lagu sameynayo hanaanka waxbarsho.
Waxa si gaar ah diirada loo saaraya in ardayda loo ogolaado in qeybaha maadooyinka qaar oo ay jaamacad ku barteen hadii mid kale ay u waregaan laga dhimo karo casharada si mudada ay qaadanayaan ay u yaraato.
Madaxa golaha ka dhexeya jaamacadaha bariga Afrika u qaabilsan tayada waxbarasho Dr Cosam Chawanga Joseph ayaa xusay in uu ku raja weynyahay in shirka ay yeelanayaan madaxweynayasha wadamada Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania iyo Ugandha lagu ansaxin doono arrimaha ay si wada jir ah u soo jeediyeen wasiirada waxbarshada ee wadamadan.
Marka hannankan la dhaqangeliyo, dalalka bariga Afrika ayaa aqoonsan doono shahadooyinka ardayda ay ka soo qaataan jaamacadaha kale ee ku yaalo gobolka.
← Dhismaha wadada isku xirta Kenya iyo Tanzania oo la dhameystirayo bisha 5-aad ee sanadka soo socdo
Masar oo ay sanadkan ka dheceen 1,736 oo dibadbaxyo ah →